Ungakhokhela kanjani ama-oda kwiwebhusayithi yethu ngokudluliswa kweBhange lomhlaba jikelele i-S - HGH Bangkok
🎁 Iphromoshini kaKhisimusi! 🎄Kusukela ngomhlaka-15 Novemba kuya zingama-25 kuZibandlela kuphela! 🎁
Uhlu lomkhiqizo 🎯
Ukuthumela imali kwelinye izwe, ngena ngemvume i-akhawunti yakho yasebhange ("i-Internet banking", "iklayenti eliku-inthanethi") esigabeni sokudluliswa kwamazwe omhlaba, bese ugcwalisa imininingwane edingekayo mayelana nomamukeli, uzokwazi ukuthumela imali phesheya izindleko zomamukeli.
Noma yiliphi iBhange ezweni lakho livumela ukudlulisa i-SWIFT. Ukuvakashela kwakho iBhange futhi utshele inhloso yakho yokwenza ukuthengiselana nokunikeza iBhange imininingwane mayelana nomamukeli ngqo kumsebenzi weBhange. Abasebenzi beBhange bazokwenzela futhi bakuqedele konke, inqubo yokuthengiselana ngeke ithathe ngaphezu kwemizuzu eyi-15.
Ukudlulisa imali phesheya ikhasimende lidinga ukwazi imininingwane ephelele ye-SWIFT ngokomzimba noma ngokomthetho, okuzothunyelwa.
esihlokweni esandulele Ukukhokha i-Bitcoins ye-HGH ngekhadi lesikweletu - ngaphandle kokudala isikhwama se-Bitcoin siqu (i-5-10 min encane kakhulu)
UDkt Mario - Okthoba 18, 2019
Okokuqala, ukwesaba ukukopela
ngemuva kokuthola imali, bathole ukulandelwa kwe-dHL ngosuku olufanayo!
uhanjiswe e-Italy ngezinsuku ze-3
Thola okunikezwayo kwangempela kuphela!
Imininingwane © 2021 HGH Bangkok.